Mareykanka oo dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg ah | Xaysimo
Home War Mareykanka oo dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg...
Mareykanka oo dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg ah
Dalka Mareykanka oo isku arka inuu yahay dalka ugu awooda badan Caalamka ayaa dalbaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad oo deg deg ah kadib markii ay soo bateen kiisaska Cudurka Coronavirus ee laga helay dalkaas.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Trump ayaa baaq deg deg ah u diray dalalka Caalamka isagoo ka dalbaday inay lasoo gaaraan ama ay ka iibiyaan qalab Caafimaad oo looga hortago cudurka Corona Virus sida ay qoreen qaar ka tirsan warbaahinta Mareykanka.
Qalabka uu Mareykanka ka doonayo dalalka Caalamka ayaa waxaa kamid ah mashiinka neefta ka caawiya dadka uu naqaska ku dhago, dawada gacmaha lagu nadiifiyo, maryaha sanka iyo afka lagu xirto, qalabka wajiga lagu xirto, dharka qafilan ee dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha ay xirtaan iyo kuwa kale oo badan.
Mareykanka ayaa dalalka Caalamka ugu baaqay inaysan dhayalsan codsigiisa isla markaasna si deg deg ah loo caawiyo maadaama uu si xowli ah usii faafayo cudurka Corona Virus oo halis weyn ku hayo dhammaan daafaha Caalamka.
Arrintan ayaa imaneyso xilli dhawaan Dowladda Turkiga ay sheegtay in gargaar caafimaad ay u dirtay dalka Mareykanka oo hadda ka mid ah dalalka la daalaa dhacaya fayraska Covid-19, Gargaarkan ayaa ah qalabka lagu baaro fayraska corona oo gaaraya 500,000 oo Turkiga uu u diray dalka Mareykanka.